सन्नी लियोनको अन्तर्वार्ताले बलिउडमा मच्चायो तहल्का – JanaSanchar.com
सन्नी लियोनको अन्तर्वार्ताले बलिउडमा मच्चायो तहल्का
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७२ माघ ७, बिहीबार) ०७:५९
फिल्म ‘मस्तिजादे’को प्रमोसनमा व्यस्त बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनसँग भारतको ‘लिडिङ टिभी च्यानल’ सिएनएनआइबिएनले लिएको अन्तर्वार्ता अहिले बलिउडमा चर्चित भएको छ । अन्तर्वार्तामा सन्नीलाई उनको विगत र अहिलेको अवस्थाबारे सोधिएको थियो । भारतीय मूलकी क्यानेडेली अभिनेत्री सन्नी लियोन बलिउडमा आउनुभन्दा पहिलो ‘पोर्न’ चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय थिइन् । उनीसँग २० मिनेट लामो अन्तर्वार्ता लिइयो ।
अन्तर्वार्तामा सन्नीले ‘बोल्ड’ जवाफ दिएको भन्दै प्रशंसा पनि बटुलेकी छिन् । उनीसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको अंश र त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा भारतीय कलाकारले दिएको प्रतिक्रिया :
प्रश्न : तपाईंको पोर्न इमेजका कारण आमिर खानजस्ता ठूला कलाकार तपार्इंसँग काम गर्न चाहन्नन् । के तपाईं यो छविका कारण दु:खी हुनुहुन्छ ?
सन्नीको जवाफ : म मेरो विगतको छविका साथ काम गर्न चाहन्नँ । र, मेरो विगतलाई लिएर आमिर मसँग काम गर्न चाहन्नन् भन्ने कुराले मलाई दु:खी बनाउँदैन । म उनको फ्यान हुँ, उनको फिल्म हेर्न छुटाउँदिनँ । म वास्तविकतामा भरोसा गर्छु । हो, बलिउडमा आएपछि मेरा केही सपना छन् । आज भएन भने म भोलि ठूला स्टार्ससँग काम गर्नेछु ।
प्रश्न : विगतमा भएको कुनै गल्ती हटाउन चाहनुहुन्छ (पोर्न इमेजबारे) ?
सन्नीको जवाफ : चाहन्नँ । जे मैले गरेकी थिएँ, सबै शतप्रतिशत ठीक थियो । मलाई विगतलाई लिएर कुनै पछुतो छैन । मैले जीवनमा जे गरेँ, त्यही कारण नै म आज यो सिटमा छु ।
प्रश्न : भारतका गृहिणी तपार्इंको ‘पपुलारिटी’ देखेर डराउँछन् । तपाईंबारे गलत धारणा बनाएका छन् । तपाईंका कारण पतिको विषयमा पनि गलत महसुस गर्छन् ।
सन्नीको जवाफ : भारतीय महिला मसँग डराउनुपर्दैन । म कसैको पति खोसेर लैजाँदिनँ । मेरो पनि श्रीमान् छ । ऊ ‘हट, सेक्सी र ट्यालेन्टेड’ छ । त्यसैले, माफ गर भारतीय महिला, मलाई तिम्रो श्रीमान्बारे कुनै चासो छैन । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
(२०७२ माघ ७, बिहीबार) ०७:५९ मा प्रकाशित
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत हत्या प्रकरणमा उनकी प्रेमिका रिया पक्राउ
अर्जुन कपुरलाई कोरोना पुष्टी भएको केही घन्टापछि प्रेमिका मलाइकालाइ पनि पुष्टी
महानायक राजेश हमालद्वारा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका करीब छसय प्राविधिकहरूको कोरोना बिमा गर्ने घोषणा